Barbaadi & Bakkabuusi
Barruu bakka buufamaa, ykn barruu dhihoo bakka buufamu fili ykn haalata tarree irra galchi.
Miseensota barruu mara ykn dhangii ati galmee keessa barbaadduuf (Barreessafi galmeewwan Calc keessaa qofa) barbaada akkasumas fila.
Barruu filatamee ykn dhangii ati barbaadduuf bakka buusa, ittaansuudhaan taatee ittaanuuf barbaadi.
Barreessaa keessatti, barruuwwan yaadaa barbaacha kee keessatti dabaluuf filachuu danddeessa.
Jappan keessa barbaaduu
Amaloota barruu dhangii ifteessii kanneen akka akaakuuwwan bocaquu, galteewwan bocaquu fi arfilee yaa'insa barruu barbaada.
Title is: Barbaadi & Bakkabuusi